Usebenza njani kumda weendawo ezimbini ze-UTM-iGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Indlela yokusebenza kumda weendawo ezimbini ze-UTM
Indlela yokusebenza kumda weendawo ezimbini ze-UTM
Sivame ukuhlangabezana nengxaki yokusebenza kwimida ye-UTM indawo, kwaye sizibona njengezintlu kuba izilungelelaniso ezikhoyo azisebenzi.
Ngenxa yokuba ingxaki
Ndacacisa ixesha elidlulileyo indlela i-UTM iqondisa ngayo umsebenzi, apha ndiza kugxila kwingxaki. Igrafu elandelayo ibonisa indlela phakathi kweCosta Rica, iHonduras neNicaragua kukho utshintsho phakathi kwemimandla ye-16 neye-17; Oko kuthetha ukuba ezo zilungelelwaniso eziphawulwe kwizangqa ezimhlophe ziyaphindwa. Inqaku elithathiwe kwiHonduran Mosquitia, ukuba akuthiwa likwindawo ye-17, liyokuwa eGuatemala kummandla we-16, ngelixa elinye elikunxweme lweAtlantic yaseNicaragua liza kuwela kuLwandlekazi lwePasifiki, kuya kwenzeka okufanayo kwi-Isla del ICaño eCosta Rica.
Kungenxa yokuba igridi ye-UTM ithatha indawo ephakathi, kunye no-x wokudibanisa i-500,000 kwaye ukusuka apho iyaqhubeka de ifike kumda wendawo. Ngale ndlela abanakuze babe nethemba. Kodwa ngenxa yoko, uququzelelo alufani, luyaphindwa kwindawo nganye nakwindawo nganye.
Indlela yokuyicombulula ngayo
Ndiza kusebenzisa lo mzekelo ndisebenzisa iMicrostation Geographics ngoku yiBentley Imephu, kufanelekile ukuba ifane ne-AutoCAD: Ndifuna ukwenza umfanekiso ngomfanekiso, ube nezilungelelanisi ezine zeekona zayo. Kwi-UTM akunakwenzeka, kuba xa kungena amanqaku, amabini aya kuwa eGuatemala.
1. Ukuguqula izilungiso ze-UTM ukuya kulungelelaniso lweendawo. Oku kunokwenziwa ngayo nayiphi na inkqubo ephandle, ngaphambili Ndinike iphepha I-Excel eyenza la maxesha. Ngenxa yoko siya kuba noku:
2. Shintsha inkqubo yoqhagamshelwano kwi-Microstation. Oku kwenzelwe ukuba singenise amanqaku kuloo fomathi.
Yenziwe nge: Izixhobo> iinkqubo zokudibanisa> inkosi
Apha sikhetha uphawu lokuqala (ukuhlela inkosi) kwaye sibonisa ukuba inkqubo yolungelelwaniso yindawo. Soloko ugcina iDatum WGS84.
Emva koko sakhetha ukhetho oluvela kwipaneli enye Master kwaye siyagcina. Inkqubo izakusibuza imibuzo, ukuqinisekisa ukuba siyayazi ukuba ithetha ntoni, siyazamkela zontathu ezi meko. Ukusukela ngoku ukuya phambili, singangena kulungelelwaniso kubude / kubude.
3. Faka izicwangciso. Oku, ngokuba kunamaphuzu ambalwa kwenziwe nge keyin; kusebenze iqhosha lomyalelo, ngoko kwi-keyin sibhala:
Senza okufanayo kwabanye:
xy = -83.0558,16.1965, faka
xy = -83.0786,14.2661, faka
xy = -85.1649,14.2885, faka
Ukuba awufuni ukuphula ikhukhunathi ungabalondoloza kwi-txt uze ubangenise ngomyalelo onjalo zenzelwe oko.
Isiphumo sokungena kwezi ngongoma zikhoyo, kumacala omabini omda womda.
Konke esikwenzayo ngoku kukulayisha umfanekiso. Oku kwenziwa kumphathi we-raster, ebonisa ukuba umfanekiso uza kulayishwa ngokudibeneyo kwaye ubonise indawo ephezulu yasekhohlo kunye nasezantsi ngasekunene.
Yintoni eyenzekayo ngezicwangciso:
Into efanayo iya kwenzeka ngeepropathi ezahlulwe ngumda wendawo; into eyenziweyo kukuba ii-vertices ziguqulelwa kwiindawo zejografi ukuba zibonise indawo enye. Indawo efanelekileyo ikuloo ndawo yokuphakamisa amanqaku ngokumisela i-GPS yokufaka ulungelelwaniso lwendawo.
U-Obelix no-Asterix bafika kwi-50 iminyaka
gvSIG, eya kuba kwi-5tas. iintsuku
Andiqinisekanga ukuba ndiyiqonda into ohlala kuyo.
Ukuba iyawela phakathi kwemimandla emibini kufuneka uphinde uyicinge ngokusebenzisa izilungelelaniso zendawo, ububanzi / ubude.
Unayo njani ekuqaleni?
NDINENGXAKI NDICELA ICEBO PHAKATHI KWAMAZIKO AMABINI: 17 18
A NDIZI UKUBA SINOKUPHUMELA
KWIMIQOQO NDIFUNA UKUYISEBENZA NJENGOBA
INTLIZIYO IN GOOGLE iququzelela UFUNA EXEL INCWADANA KHONA sikhuthale ngokukhawuleza VA ENKOSI KWANELE
Olunye ukhetho kukuba ubathumele kwiGoogle Earth kwaye uyayijonga ngokwenza igridi yedigri. Imibuliso kwilizwe lamachibi kunye neentaba-mlilo; xa ndidlula apho sine barbecue.
InguCarlos Aguilar uthi:
Ndiququzelele kwifom ye-XY, ezinye zazo ziwela kwi-16 ZONE kodwa ndikrokrela ukuba abanye bewela kwi-ZONE 17, ndingayazi njani ukuba yiyiphi indawo?
amanqaku indawo I wgs84 17N kwaye ubabonise enembonakalo kwilizwe e WGS 84 17 South ndawo, le projekthi ye ArcGIS 10.2 ngaba isiphoso, enkosi ngoncedo lwakho
UCarlos Antonio Cabrera Gómez uthi:
Uqeqesho lwakhe oluhle kakhulu, ndiyathemba ukuqhubeka ndifunda olu lwazi kwaye ndiphumeze ngeenkqubo zabo. Ndiza kukuthumela ngokubambisana okufunekayo kwaye kusengaphambili ndifuna ukuba impumelelo yakho iteknoloji yakho ephakamileyo ifakwe kwiGoody and Topography.
Ungayitshintsha impuma yobuxoki, ukuze i-meridian esembindini ikwi-longitude ekuvumela ukuba ube nayo yonke into kumtya ofanayo. Ngaphandle kokungalunganga kotshintsho kulungelelwaniso.
Enye indlela ukusebenzela ukulandelana kunye neendandatho.
Mhlobo Ndisebenza ku-Arcgis 9.3, uyazi ukuba ndingatshintsha njani kwindawo enye kuphela.
Molo mhlobo, ungandinceda, ndinolwazi malunga nendawo endifunda kuyo kwimimandla emibini eyahlukeneyo ye-17S kunye ne-18S, bakwinkqubo yesalathiso yeWGS84 efanayo. Oku kwenza ukuba ulwazi lubekhona ngokufuduka kuba kwiindawo ezahlukeneyo kwaye ndifuna ukuba babe kwi-18S kuphela.
Ndiyakuvuyela kwiblogi yakho
Mdala ibhlog yakho, kodwa ukupapashwa okuninzi wonke umntu uyoyika, kubonakala ngathi uphelelwe lithemba, ndiyazi ukuba awuzukundivuma, ngaphambi kokuba ibe semgangathweni, kodwa amatyala atshintshile ukuqondwa "komsebenzi" wakho.
Andazi. Kuya kufuneka ukuvavanya, imifanekiso inokuba noqikelelo lwayo, kodwa xa usenza imephu yokubonisa entsha inokuba kulungelelwaniso lwejografi kwaye ngenxa yoko kufuneka igxekwe kubhabho.
Kwaye kwiMbonet, iimbumba ezimbini ze-orthophotos (ezivela kwi-PNOA, i-UTM) zingadibaniswa njani ne-spindle ehlukeneyo?
Sawubona inyaniso kukuba inkcazo yinto enhle, kodwa ndifuna ukubhala inqaku malunga nendlela yokusebenza kwindawo yokungahlali.
Ingxaki endinalo q q ilizwe lam EBOLIVIA le ummandla ezintathu 19, 20 kunye 21 kwaye ilungelelanise uninzi lwawo ngexesha 19, kodwa inxalenye abangena lommandla 20 (indawo idlulela).
Oko ndifuna ukuyibuza kukuba ndiza kusebenza kwiintlobo ezimbini okanye kuphela kwi-spindle eyodwa.
Siyabonga kusengaphambili kubambiswano lwenu kunye nenyaniso kukuba iphepha lihle kakhulu, qhubekani nibulela ngokubambisana kwenu.
Ndicinga ukuba uthetha ngedatha ngaphandle kokujonga. Kwangokunjalo ubanika indawo ekubhekiswa kuyo kwaye uyihambise, leyo iwe kwenye indawo uyiguqulela kubude nobude.
marco antonio uthi:
Le ndlela enhle yokusebenza, KANYE NAKUBA IINKCUKACHA, ulungelelanisa njani amaphuzu xa uyenzile nge-electronicododite
Emerson Marin uthi:
Ukuba umhlobo onjalo ndiyavuyisana nawe ngebhlog yakho, bambalwa abantu kwindalo iphela ababelana ngenxalenye yexesha labo ekuxhaseni ngokudibeneyo kwizicelo ezahlukeneyo zophando kunye nezobunjineli, bendilandele iinyanga ezithile izihloko osasaza ngazo , ezinye zazo zindikhonze njengezixhobo okwexeshana, kuba kwimicimbi yezabasebenzi ndiyi-cadista kwaye ngokubhekisele kwinqanaba lam elizimeleyo ndinaso sonke isikhululo se-SOKKIA 630RK, kwaye nangona umvuzo wam womsebenzi undithintela ekuzinikeleni kuhlolo Ndijonge izihloko ezigcina zigcinwa kuyo yonke imephu yeemaphu kunye neemveliso zobunjineli, ewe, ndingazandisi, ndithi ndlela-ntle.
IVenezuela, iAnaco Edo. Anzoategui.
Ukufudusa iqonga leGeospatial kwiminyaka eli-10 kamva-Microstation Geographics-Oracle Spatial